အရူး တစ်ယောက်ရဲ့အသဲကွဲ ပြတိုက် | PoemsCorner
အရူး တစ်ယောက်ရဲ့အသဲကွဲ ပြတိုက်
In: ကဗျာ Posted By: Lamin Zaw Date: May 15, 2011
Gypzy တစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟချက်
အသဲကွဲ လိပ်ပြာတစ်ကောင်၏ ဆုတောင်း
Leave comment 19 Comments & 6,516 views
ကဗျာက အစပိုင်း ကောင်းလာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းရောက်တော့ စကားလုံး အားနည်းသွားပြီး ပေါ့သွားတယ်။ နောက်ပိုင်းလေး စကားလုံးတင်းပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဆရာလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖတ်ပြီး မြင်တာလေး ပြောကြည့်တာပါ။
By: chiron at May 15, 2011
ဟုတ်ကဲ့ အခုလို ဝေဖန်ပေးတဲ့ chiron ကို အထူး တလည်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ဗျာ ၊၊ ၊၊ ကျွန်တော် ကဗျာ ကို ဒီလို ပုံစံမျိုး နဲ့ တစ်ခါ မှ မရေးဖူးသေးပါဘူး ၊၊ ရေးချင်ခဲ့တာ ကြာနေပါပြီ ၊၊ အစမ်းသဘောမျိုး လက်သပ် ရေးကြည့်တဲ့ သဘောပါ
ဆက်လက် ကြိုးစားပါဦး မယ် ၊၊
By: လမင်းဇော် at May 15, 2011
By: အသဲကွဲမိုး at May 15, 2011
အခုလို အားပေးသွားတဲ့ အတွက် မ မိုး ( အများခေါ်သလိုပဲ ခေါ်လိုက်တာပါ ) ကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ် ၊၊ 🙂
By: လမင်းဇော် at May 16, 2011
By: terry at May 16, 2011
ကို တယ်ရီ ရေ . . .အထူး ပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ဗျာ 🙂
By: နှင်းဖွေးလေး at May 19, 2011
i m also going2b fool sooner n later.
ta ti ya tine nin sar tway phout phout phat ya dar pye dot me.
plastic card laung hma ya dot me htin de.
ma hote yin nga ma tay khin hti taung ma khan naing hmar soe ya de.
a tate tone ka pe sar tway pay dar.
a khu kya dot ma pay dot bu.
a chit tway short kone p lar?
a u ta yoak yeate kwe pya tike.
By: ei lay at Aug 21, 2011
နောက်တခါ ထပ်ဖတ်သွားတယ်ဗျာ..နောက်တခါ………………….. :'(
By: အသဲကွဲမိုး at Jun 8, 2012
တစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်ရင် ပိုကောင်းလာတာတွေဘဲ တွေ့နေရတော့ အမှန် အတိုင်းပြောရရင် ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် မနာလိုဖြစ်မိတယ်..ကိုလမင်းဇော်…
ဒီကဗျာလေးကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပါဘဲ။။ စဉ်းစားထားရတဲ့ ရှုထောင့်ကို မြင်ပြီး အကြီးအကျယ် လေးစားမိပါတယ်… ခင်ဗျားက ကျွန်တော့အတွက် Perfect ဖြစ်နေတဲ့ အကို ကဗျာဆရာတစ်ယောက်ပါဘဲ…
တစ်ပိုဒ်ချင်းချပြကြေးဆိုရင် ပြောင်းပြန်အနေနဲ့ မကြိုက်တဲ့တစ်ပိုဒ်ကို ချပြချင်တယ်.. ကျန်တာတွေက ကြိုက်လွန်းနေလို့..
ကိုချီရွန် (ပုလဲ) ပြောသွားသလိုပါဘဲ စာပိုဒ်နံပါတ်သုံးကိုသဘောမကျဘူး အောက်ဆုံးသုံးကြောင်း က…ကဗျာကို ဖော့ပစ်လိုက်သလိုဘဲ
ဒါအားမနာတမ်းပြောသွားတာပါ.. ကိုလမင်းဇော်ရေးတဲ့ ကဗျာတွေကို ဖတ်နေကျ ကြိုက်နေကျ…အားကျနေကျ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ လောဘတကြီး ဖြစ်သွားတယ်လို့ဘဲ မြင်ပေးပါ..။
By: 13th at Jan 5, 2013
By: ei lay at Jan 6, 2013
နောက်တစ်ကြိမ်လဲ လတ်ဆတ်ဆဲ ကောင်းမွန်ဆဲ 🙂
By: နိုးဆက် at Mar 12, 2013
By: နွေ at Mar 12, 2013
အခု ဘယ် သောင် ကမ်း မှာ တင်နေလဲ ၊၊
By: tabound at Mar 12, 2013
Nit tat swar kan sar twe pr tal…
By: mankhat wint at Mar 13, 2013
အခု ဘယ် သောင် ကမ်း မှာ တင်နေလဲ
By: wa lone lay at Feb 28, 2014